Ngathi | ININGBO QINISEKA IPHEPHA LOKUGQIBELA, LTD
I-Ningbo iqinisekile ukuba iPhepha Co, Ltd yasekwa ngo-2011, ikakhulu ebandakanyeka kuthengiso lwasekhaya nakwamanye amazwe kwiphepha lokutya, iphepha eligutyungelweyo, iphepha lendebe, ikhadi lendlovu, iphepha lesinyithi, iphepha lesitika. Okwangoku, siye saseka ubudlelwane lwentsebenziswano ixesha elide kunye neenkampani zokushicilela ezingaphezu kwe-1 000 ehlabathini lonke.
Sinesitokhwe esimileyo seetoni ezingama-8,000 ngenyanga, kunye noomatshini abali-18 abayimfuneko njengomatshini wokusika, umatshini wokusika kunye nomatshini wokuzenzela, umatshini wokupakisha we-thermal shrinkage, umatshini wokupakisha we-ect ozenzekelayo.
Ke oko kuthetha ukuba sinokuhambisa iodolo yakho ngexesha elifutshane kakhulu ukuhlangabezana neemfuno zakho, kwaye sinako ukwenza lonke iphepha lobungakanani elenzelwe wena. kukho umzi-mveliso omncinci onokukwenza oko emarikeni.
Yintoni esinokuyenza kuwe?
1: Sinako ukukwazi ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho zobukhulu obahlukeneyo kunye nobunzima ngexesha elifanelekileyo ephepheni.
2: umhla omfutshane we-deliver.
3: Ukuba ufuna enye inkonzo ephepheni, njengokushicilela, yenze igqitywe iimpahla ..., ewe, khululeka ukundixelela, sinemveliso ethembekileyo esasisebenza nayo, sinokukunceda ukuba uyenze kakuhle ixabiso
I-4: Ukuba ufuna iphepha elivela kwi "APP" okanye "i-Chenming", sinokulithenga ngexabiso elihle kakhulu, kuba uyazi, le fektri yamaphepha ayenzi ngqo ishishini nabathengi bokugqibela, bathengisa iphepha kuthi- Iarhente (kufuneka sithenge ngaphezulu kwe-1500 yeetoni ngenyanga kubo ukugcina imeko ye-arhente).
5: Into esihlala sizama ukuyenza kukunceda ukuba usebenzise imali encinci ukufumana iphepha elifanayo elisemgangathweni xa kuthelekiswa nemarike yakho yasekuhlaleni.
I-6: Sinezityebi ezibiza kakhulu kwimarike yamaphepha, kwaye uninzi lwamaphepha aphesheya aphuma kwimarike yaseTshayina, singakunika ezona ndaba zintsha zephepha.
Masibe liqabane lakho elinyanisekileyo kwaye sikuncede ekusombululeni zonke iingxaki ezisendleleni.
(1) Umgangatho ophezulu, umgangatho wamazwe aphesheya, isiqinisekiso se-ISO KUNYE ne-FSC;
(2) Amava atyebileyo kwishishini lehlabathi;
(3) i-OEM yamkelekile; Umatshini wephepha oguquguqukayo, bonke ubungakanani bunokuveliswa;
(4) Inkonzo yethu ephezulu ye-VIP;
(5) Ikowuteshini ekhawulezayo nechanekileyo;